Firefox 6.0 ho an'ny Android dia misy amin'ny Android Market | Androidsis
Mifanindran-dàlana amin'ny fanombohana ny kinova desktop, ny Mozilla Foundation dia namoaka ny tranokala Firefox 6.0 ho an'ny fitaovana finday miorina amin'ny rafi-piasa finday Android.
Anisan'ireo fiasa vaovao amin'ny kinova ny fandikana tsara kokoa ny sary sy ny fanitsiana sasany amin'ireo singa ao amin'ny pejin-tranonkala sy ny habeny ho an'ny takelaka Android. Mozilla dia nilaza fa nanatsara ny fahombiazan'ny Firefox ho an'ny efijery lehibe kokoa.
Etsy andaniny, haingana kokoa ny zoom an'ny Firefox 6.0 ary nohatsaraina ny fanohanan'ny fiteny ny tranokala Mozilla. Ho an'ny Android 2.3 Gingerbread, niova ihany koa ny fisehoany ary izao dia toa "rindran-tany" amin'ny sehatra finday Google.
Ny Firefox 6.0 ho an'ny Android dia misy koa fanatsarana ny fahombiazan'ny fampiasana fahatsiarovana. Toy ny amin'ny kinova desktop, ny iray amin'ireo zava-nisongadina dia ny add-ons azo alaina: misy mihoatra ny 160 misy, izay manampy fiasa sy safidy vaovao toy ny fanakanana ny doka na fanovana ny lohahevitra atolotray azy. Ny browser default.
Ny rindranasa tranokala Firefox 6.0 ho an'ny Android dia azo alaina maimaimpoana maimaimpoana amin'ny tsena Android.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Firefox 6.0 ho an'ny Android dia efa hita ao amin'ny Android Market